Iindaba zesiXhosa, 22 eyoKwindla 2019 – Zibonele FM | 98.2
Written by Ashia Nkontsa on 22/03/2019
Uyabuya umhlaba wabahlali base District six
Inkundla yephondo leNtshona Koloni iyalele urhulumente ukuba afezekise isithembiso sakhe sokubuyisela umhlaba kumakhulu-khulu abantu ababefake amabango baseDistrict Six. Ngolwesithathi le nkundla ifumanise urhulumente enetyala lokunyhasha amalungelo abafaki bamabango ngokufeda ukubuyisa umhlaba. Abahlali ababefake amabango omhlaba ngomhla wamashumi amathathu ananye kwinyanga yoMnga ngomnyaka ka1998 bachwechwele enkundleni besiya kufuna iimpendulo kurhulumente malunga nelixa lokubuyela kumakhaya abo ababekhutshwe ngetshova kuwo ngurhulumente wocalu-calulo. Kwisigwebo sakhe ngosuku oluphambi kolwamalungelo oluntu ujaji Jody Kollapen ugxeke urhulumente ngokuwa nganeno ukubuyisela lo mhlaba. UKollapen uthi abantu abangamakhulu alithoba anamashumi amathandathu anethoba nabenza umyinge wamashumi asibhozo wabo bafake amabango ngeminyaka yoo90 basajonge enkalweni nanamhlanje belinde ukubuyiselwa emakhayeni abo.
Baligcwabevu abahlali ngumsindo ngeeNkonzo zika rhulumente
Uvuliwe kwakhona uhola wendlela uN7 kulandela uqhankqalazo lwangentseni yanamhlanje kummandla waseMoorreesburg eSwartland. Intloko yezothutho kwiphondo leNtshona Koloni umnumzana Kenny Africa uthi kutyalwe amagosa ezendlela kwaye namagosa esipolisa ayancedisa ukugcina ucwangco. Uthi okwakalokunje imeko iyalawuleka emva kolu qhankqalazo lokuvalwa kwendlela ngabahlali abalugcwabevu ngumsindo begqushalazela iinkonzo zikarhulumente. Kungokunje olu qhankqalazo lungaphakathi eWestbank naseMalmesbery.
isicelo sesibheno kwisigwebo sakhe seminyaka elishumi elinesihlanu entolongweni
kwinkundla ephakamileyo yaseKapa namhlanje uWilliam Beale. Kwinyanga yeNkanga
kunyaka ophelileyo inkundla yenkqila yaseThembalethu eGeorge igwebe le njineli
yeeKhompyutha yasePlettenberg Bay iminyaka elishumi elinesihlanu entolongweni emva
kokufunyanwa inamatyala angaphezu kwamawaka alishumi elinesibhozo okuba
noshicilelo lwamanyala yabantwana. Usomlomo wegunyabantu lotshutshiso kwiphondo
leNtshona Koloni umnumzana Eric Ntabazalila uthi umbuso uyasiphikisa isicelo
Kulindeleke iminyinyiva kubemi beli ngakumbi abo bathwaxwa kukumka kombane
Kuzakubakho umnyinyiva noko kubemi belizwe loMzantsi Afrika abatwhaxwa ngucimi-cimi wombane nanjengoko namhlanje u-Eskom emilisele umlinganiselo wesibini wokuphungula umthwalo kumandla ombane. Kuqengqeleke iintsuku eziliqela le nkampani imilisele de wazinza umlinganiselo wesine. Ukanti umongameli Matamela Cyril Ramaposa izolo uthe izakudlula le ngxaki yombane nethe yanechaphaza elingelihle kuqoqosho lweli lizwe olusele lunkene-nkene kwakunye nakukhuseleko loluntu nalapho amanqwanqwa esipolisa ekuhlaleni adize ukuba izaphuli mthetho zisebenzisa ithuba lobumnyama ukufihla izenzo gwenxa zazo. Intlaninge yamashishini asakhasayo anenkxalabo yokungabi nakho ukuhlawula imivuzo yabasebenzi ndawonye nokuphelelwa kwabantu yimisebenzi ngenxa yefuthe lokuswela umbane kwimveliso.
uMbalela ulindeleke uba ame phambi kweKomishoni
Obefudula engumphathiswa wezemidlalo nolonwabo kwilizwe loMzantsi Afrika umnumzana Fikile Mbalula kulindeleke azibulisele kwikomishoni ephanda ukunqakulwa ngobhongwana kukarhulumente ngoosomashishini babucala namhlanje eParktown eRhawutini. Kwinyanga ephelileyo u’Razzmataz ubethe ngenqindi etafileni esithi uzakulenyusa izinga lokwaneka inyaniso xa enikezela ngobungqina kule komishoni esithi konke okudizwe ngowayesakuba ngumphathiswa wezimali umnumzana Trevor Manuel ngaye phambi kwekomishoni kaZondo kuyinyaniso engangxengwanga kwaye uzakwenza uchatha kuyo. UManuel ungqine ngelithi kwenye yeendibano zesigqeba esiphezulu seANC uMbalula wacuntsula kweyabantwana egixela intetha emalunga nendibano yakhe nelinye lamalungu osapho lakwaGupta.
Usuku lamalungelo oluntu lufanele ubhiyozelwa
Inkokheli yeqela le-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Sello Malema ugxibhe kabukhali iqela leANC esithi eyona nto liyibeke phambili kukutyelela ummandla waseSharpville ngosuku lwesikhumbuzo kuphela phof’libe lingasele nto iimfuno zoluntu. UMalema uthi usuku lwamalungelo oluntu lufanele ukuba lithuba lokubhiyozela awona maqhawe eli lizwe awalwela inkululeko nentando yesininzi. Ukuthethe oku kwindibano yeli qela ebibanjelwe cebu kuhle kwidama iDlomo Dam eSharpville nalapho bekuqatshelwa usuku lokubulawa kwabaqhankqalazi ababechasene nenkqubo yamapasi karhulumente wocalucalulo ngomnyaka ka1960. UMalema uthi yayingumseki wePAC umnumzana Mangaliso Robert Sobukwe owakhokela amawaka-waka abantu kuqhankqalazo lokutshisa amapasi kwaye ungoyena mntu wayefanele ukuba ngumongameli weli lizwe. Uthi igqunywe okombona ufihlwe ngamakhasi eyona nyaniso ngembali yaseSharpville kwaye uyavelana nabemi bale ndawo, abatyelelwa yi-ANC ngolu suku kuphela ze inyamalale xa bedinga uncedo.